Ahoana ny fisafidianana valizy, fonosana ary kitapo-News-Phu Ly Bao Co. Ltd.
Ahoana ny fomba fisafidianana entana, fonosana ary kitapo
Ny fananana karazana valizy, fonosana na kitapo mety ho an'ny dianao dia mety hanamorana ny fonosana sy hitsambikina amin'ny fiaramanidina na hamely ny lalana mora kokoa ary tsy hiady saina. Fa miaraka amina fomba maro hisafidianana, ny manapa-kevitra ny amin'izay mety aminao dia mety ho fanamby. Ity lahatsoratra ity dia mamaky ireo karazana valizy isan-karazany ary manome torohevitra momba ny fisafidianana ny habeny, ny lanjany ary ny haavon'ny faharetana. Izy io koa dia mandeha amin'ny endri-javatra toy ny kodiarana, efitrano finday ary fampifanarahana entina.
Karazana valizy, kitapo ary fonosana
Misy sokajy telo malalaka amin'ny valizy: kitapo misy kodiarana, fonosana fandehanana ary duffels fitsangatsanganana. Rehefa manapa-kevitra ianao hoe iza no mety aminao, mety hanampy ny mieritreritra zavatra toa ny alehanao, ny fomba ahatongavanao any ary izay kasainao hatao rehefa tonga any ianao.
Kitapo misy kodiarana
Ny tombony miharihary amin'ny valizy, fonosana ary kitapo misy kodiarana dia ny fomba mora entin'izy ireo mamaky ny seranam-piara-manidina sy midina amin'ny arabe sy ny sisin-dalana malama. Misy karazany telo ny valizy misy kodiarana: valizy mihodina, duffel misy kodiarana ary kitapo misy kodiarana.
Kitapo mihodina: Natao ho an'ny mpandeha nentim-paharazana, ny valizy mihodina no hitanao ny ankamaroan'ny olona misintona azy ireo any amin'ny seranam-piaramanidina. Izy ireo dia manana habe maromaro ary matetika dia misy fananganana matanjaka vita mba hifehezana ny fahasarotan'ny rafitra fitaterana entana. Izy ireo amin'ny ankapobeny dia tsara indrindra amin'ny dia amin'ny raharaham-barotra, fitsidihan'ny fianakaviana, fitsangatsanganana an-dàlana ary fitsangatsanganana any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe.
Duffels misy kodiarana: Tsy misy na dia mitelina fitaovana toy ny kitapo duffel aza, ary ny iray manana kodiarana dia safidy mety ho an'ireo mpandeha amoron-dranomasina. Raha toa ka mitaky fitaovana amin'ny habe sy endrika miovaova matetika ny fiainanao, dia fomba mahomby hamehezana azy rehetra ny duffel mihodina. Ho an'ny mpanamboatra maivana dia manome toerana kely kokoa ny duffel mitondra kodiarana nefa mamela anao handao ny fotoana sy ny fandaniana amin'ny fizahana kitapo. Duffels misy kodiarana dia safidy tsara amin'ny dia fitsangatsanganana mitaky fitaovam-piadiana mahery vaika na hafahafa, dia lavitra ataon'ny fianakaviana ary dia an-dàlana. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny safidy duffel dia vakio eto ambany ny momba ny duffels.
Kitapo kitapo misy kodiarana: Malaza amin'ny mpandehandeha mitsangatsangana, ireo dia manambatra ny fahamoran'ny valizy misy kodiarana miaraka amin'ny fivezivezan'ny kitapo. Azonao atao ny mitondra fitaovana be dia be amin'ny fisintomana tsotra ny famitana azo zahana. Manatrika fifamoivoizana amin'ny tongotra na tohatra lavitra? Tady amin'ny soroka soroka sy fehin-kibo mba hahazoana fahafaha-mitondra mitondra tanana. Ny kitapom-batsy misy kodiarana dia matetika no tsara indrindra amin'ny dia lavitra sy fitsangatsanganana an-dàlana. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny kitapom-batsy dia jereo ny fizarana fonosana etsy ambany.
Ireo dia miainga amin'ny duffels tsotra izay atsipinao eny an-tsoroka mankany amin'ny duffels misy kodiarana miaraka amina tahony lava (raha te hahalala momba ny duffels misy kodiarana, jereo ny fizarana Whezy Wheeled amin'ity lahatsoratra ity.) Ny tombony voalohany amin'ny duffels amin'ny safidy hafa dia ny endriny tsotra. Mora ampiasaina izy ireo ary manasongadina toerana lehibe iray hanangonana ny fitaovanao sy ny fitafinao amin'ny ankapobeny. Mazava ho azy fa mety ho fatiantoka izany raha toa ianao ka karazana voarindra tena mila paosy sy efitrano misaraka mba hitoerana. (Ny fomba iray hijanonana ho voalamina tsara amin'ny duffel dia ny manangona ny entanao amin'ny cubes fitsangatsanganana na kitapo zavatra.)
Ny kitapo duffel dia misy amin'ny habe maro, avy amin'ny kitapo entina milanja 20-30 litatra ary mitazona akanjo mandritra ny faran'ny herinandro hatramin'ny duffel goavambe mitazona 100 litatra na mihoatra ho an'ny tranga izay mila fitaovam-piadiana taonina.
Ny kitapo duffel nentin-drazana izay tsy manana kodiarana dia mety ho toa fomba taloha raha jerena ny fomba ahafahan'ny kodiarana mora entina. Saingy, ho an'ny fivezivezena any amin'ny toerana lavitra misy làlana tsy voavangongo, ny kodiarana dia ho sahirana kokoa noho ny vidiny, ary hanampy kilao marobe amin'ny lanjan'ny kitapo izy ireo. Tsy maivana kokoa ny duffels nentim-paharazana, fa mora azo koa izy ireo noho ireo manana kodiarana, ka manamora ny entana ao an-damosin'ny fiara, mivoaka amin'ny talanton'ny tafo na amin'ny tadin-biby. Ireo duffel ireo dia mora kokoa ihany koa ny tehirizina (tsy misy faritra henjana, ka mihorona kely kokoa) ary matetika no tsy dia lafo. Safidy mety tsara izy ireo ho an'ny mpihanika, mpandehandeha mpivahiny ary olona manana teti-bola izay mila manangona fitaovana be dia be.
Ireto kitapom-batsy mpizaha tany ireto dia miavaka amin'ny toerana tsy ahafahan'ny valizy misy kodiarana: amin'ny vatokely, arabe vatolampy, tohatra ary faritra tsy mitovy. Ny fonosana fitsangatsanganana dia toy ny kitapom-batsy hafa amin'ny fomba anaovanao azy ireo sy ny fanampiana omen'izy ireo, saingy manana endri-javatra manokana momba ny dia izy ireo, toy ny paosin'ny fandaminana, fehikibo miafina ary fehin-tsoroka, ary fiarovana azo antoka, toy ny zipper azo zahana. Izy ireo dia mety ho an'ny mpandeha izay te ho be finday ary tsy maninona mitondra ny zava-drehetra ao an-damosiny.
Prev Miverena Manaraka
Phu Ly Bao Co. Ltd (PLB) 71 - 73 Street No. 1B, Binh Tri Dong B, Distrikan'i Binh Tan, Tanànan'i Ho Chi Minh, Viet Nam
0329861789 Chen （Mr） - 0909350418 Mey (Ms)